ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းများကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၃)၊ အမှတ် (၄၁) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင် ဖြန့်ချိ ရောင်းချလျက်ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတစ်ပတ်ထုတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် အပိုင်း (၁) အပိုင်း (၂) နှင့် အပိုင်း (၄) တို့ ပါရှိပါသည်။
အပိုင်း (၁) တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (ဝန်ကြီးရုံး) အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမိန့်အမှတ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန (ဝန်ကြီးရုံး) အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊
အပိုင်း (၂) တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊
အပိုင်း (၄) တွင် ATPOST COMPANY LIMITED ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နောက်ဆုံး အစည်းအဝေးခေါ်ယူခြင်း၊ ဘီယွန်း - အမေးဇင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (BEYOUND AMAZING COMPANY LIMITED) အစုရှင်များ၏ ဆန္ဒအရ နောက်ဆုံးအပြီးသတ် ကုမ္ပဏီတရားဝင် ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ကုမ္ပဏီအား ဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေငြာ MIRAIT Technologies Myanmar Co., Ltd နှင့် MIRAIT Information Systems Myanmar Co., Ltd အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆန္ဒအလျောက် ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပန်းကြည်စင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (PANN KYAL SIN COMPANY LIMITED)၊ နေမျိုးသီဟ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (NAY MYO THIHA COMPANY LIMITED)၊ ဆယ်စင်ရွှေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (SAL SIN SHWE COMPANY LIMITED)၊ ရွှေဝတီဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက် (SHWE WATI OO COMPANY LIMITED)၊ သီရိဧက ကုမ္ပဏီလီမိတက် (THIRI AKA COMPANY LIMITED) နှင့် ဘီ.အာ ဘက်စ် ရိုင်ရယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၆ (၁) အရ ကုမ္ပဏီကို အစုရှယ်ယာရှင်များဆန္ဒအလျောက် ဖျက်သိမ်းရန် ကြော်ငြာခြင်း၊ အက် (ဖ်) . ဝိုင်. အမ် (မ်) အသ်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (F Y M INTERNATIONAL Co., Ltd) နှင့် လှ နှင့် ထူး ဆောက်လုပ်ရေး ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် (HLA & HTOO CONSTRUCTION Co., Ltd) တို့အား အပြီးသတ်ဖျက်သိမ်းနိုင်ရန်အတွက် နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း၊ Begonia Global Development Company Limited မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄၈ အရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်၊ ကံကောင်းသော ကျောက်တုံးများရောင်းဝယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် (LUCKY STONE TRADING SERVICES COMPANY LIMITED) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ - ၃၄၈ အရ ကုမ္ပဏီအား ဆန္ဒအလျောက် ဖျက်သိမ်းရန်အတွက် အထူးဆုံးဖျက်ချက်၊ KYIN KYIN COMPANY LIMITED နှင့် MYANMAR THREE MOUNTAINS GENERAL TRADING Co., Ltd တို့ ဖျက်သိမ်းရန် ကြော်ငြာချက် တို့ပါဝင်သည်။